DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA EPSON L210 NBIPUTE - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Epson L210 MFP
Mgbasa ozi dị egwu n'ụdị dị iche iche bụ ụdị kaadị ịkpọ òkù nke Intanet nke oge a. N'ụzọ dị mma, anyị mụtara otú e si edozi ihe omume a site n'enyemaka nke ngwá ọrụ pụrụ iche e wuru n'ime ihe nchọgharị, tinyekwara gbakwunye. Opera nchọgharị nwekwara ihe mgbakwunyere na-emepụta ya, ma ọ bụghị mgbe niile ọrụ ya zuru oke igbochi mgbasa ozi intrusive nile. Mgbasa AdBlock na-enye ohere ndị ọzọ n'akụkụ a. Ọ na-ebugharị ọ bụghị nanị windo na ọkọlọtọ na-emepụta ihe, kama ọbụlagodi mgbasa ozi ike na weebụsaịtị dị iche iche na Intaneti, gụnyere YouTube na Facebook.
Ka anyị mụta otú e si wụnye AdBlock add-on maka Opera, na otu esi arụ ọrụ na ya.
Nke mbụ, chọpụta otú ị ga-esi tinye Mgbasa AdBlock na Opera nchọgharị.
Meghee usoro ihe omume nke usoro ihe omume a, ma gaa na mpaghara "Extensions". Na listi adaala na-emepe, họrọ ihe "Download extensions".
Anyị na-adaba na mpaghara asụsụ Russian nke ọrụ saịtị Opera nchọgharị. Na ụdị ọchụchọ, tinye AdBlock, wee pịa bọtịnụ ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ebute anyị gaa na ibe ahụ na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Nke a bụ ihe kasị mkpa na arịrịọ anyị. N'ebe mbụ nke mbipụta bụ naanị mgbatị anyị chọrọ - AdBlock. Pịa na njikọ ya.
Anyị na-enweta stanitsa nke mgbakwunye a. N'ebe a ị ga-achọta ihe ọmụma zuru ezu gbasara ya. Pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aka ekpe nke "Tinye na Opera" peeji nke.
Ntinye ntinye na-amalite na-ebugharị, dịka ọ na-egosi site na mgbanwe nke bọtịnụ bọtịnụ site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo.
Mgbe ahụ, ihe nchọgharị ọhụrụ na-emepe na-akpaghị aka ma na-ebute anyị gaa na saịtị ntinye aka AdBlock. N'ebe a, a gwara anyị ka anyị nye enyemaka niile maka mmepe nke usoro ihe omume ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na i nwere ike imeli ya, mgbe ahụ, a na-atụ aro ka ị nyere ndị mmepe aka, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume gị, mgbe ahụ eziokwu a agaghị emetụta ọrụ nke mgbakwunye ahụ.
Anyị na-alaghachi na ebe echichi nke gbakwunyere. Dịka ị pụrụ ịhụ, bọtịnụ gbanwere agba site na edo edo ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na ihe e dere na ya na-ekwu na e mechara nwụnye ya. Na mgbakwunye, akara ngosi kwekọrọ na-egosi na opa nchọgharị toolbar.
Ya mere, agbakwunyere AdBlock tinye ma na-agba ọsọ, mana maka imezi ya n'ụzọ ziri ezi, ị nwere ike ime ntọala maka onwe gị.
Iji gaa na window ntọala tinye, pịa akara ngosi ya na ihe nchọgharị toolbar, wee họrọ "Ngwa" site na ndetu nke na-egosi.
A na-atụba anyị n'ime windo Mgbakwunye AdBlock isi.
Site na ndabara, usoro AdBlock ka na-efu mgbasa ozi unobtrusive. Nke a na-eme nke a site na ndị mmepe, ebe saịtị na-enweghị mgbasa ozi apụghị ịzụlite dị ka kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọlị. Ma, ị nwere ike ịhọrọ ịhọrọ nhọrọ "Na-enye ụfọdụ mgbasa ozi unobtrusive." Ya mere, ị ga-amachibido iwu ọ bụla mgbasa ozi na ihe nchọgharị gị.
Enwere ihe ndị ọzọ nwere ike gbanwere na ntọala: ikikere ịgbakwunye ọwa YouTube na listi ọcha (ndị nwere nkwarụ), ikike iji tinye bọtịnụ ntinye aka (ihe ndabere site na ndabara) na nchịkọta nhọrọ, ngosipụta nke ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi egbochi (enyere site na ndabara).
Tụkwasị na nke ahụ, maka ndị ọrụ dị elu, enwere ike ịnweta nhọrọ ọzọ. Iji mee ka ọrụ a rụọ ọrụ, ịkwesịrị ịlele igbe dị na mpaghara kwekọrọ na parameters. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ ọnụọgụ ọzọ nke nọmba ndị na-egosi na foto dị n'okpuru ebe a. Ma maka ọtụtụ ndị ọrụ, ntọala ndị a adịghị mkpa, n'ihi ya site na ndabara ha na-ezo.
Mgbe e mechara ntọala n'elu, mgbatị ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka onye ọrụ mkpa.
Ị nwere ike ijikwa ọrụ nke AdBlock site na ịpị bọtịnụ ya na toolbar. Na menu ndapụta, anyị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ nke ihe ejiri egbochi. I nwekwara ike ịkwụsị ndọtị, mee ma ọ bụ gbanyụọ mkpọchi mgbasa ozi na ibe ụfọdụ, leghaara nchịkọta izugbe nke gbakwunye, kọọ akụkọ na saịtị onye mmepụta ahụ, zoo bọtịnụ na toolbar, ma gaa na ntọala anyị kwurula na mbụ.
Enwere ikpe mgbe agbakwunyere AdBlock mkpa maka ihe kpatara ya. Mgbe ahụ, ị ​​ga-aga na ngalaba nchịkọta ndọtị.
N'ebe a, ịchọrọ ịpị obe n'obere akụkụ aka nri nke ngalaba AdBlock. Mgbe nke a gasịrị, a ga-ewepụ ndọtị ahụ.
Na mgbakwunye, n'ebe ahụ na njikwa nchịkọta ndọtị, ị nwere ike wepụ AdBlock nwa oge, zoo site na toolbar, kwe ka ojiji ya na ọnọdụ nzuzo, mee ka nchịkọta nchịkọta, ma gaa na ntọala.
N'ihi ya, AdBlock bụ otu n'ime ntanetị kachasị mma na nchọgharị Opera maka igbochi mgbasa ozi, na enweghị nkwanye ùgwù, nke kachasị ewu ewu. Ihe mgbakwunye a bụ mgbasa ozi dị elu, ma nwee nnukwu ohere maka omenala.